‘सके सहमति नसके मतदानबाट राजधानीको टुंगो लाग्छ’ - Khabar Samridhhi
Posted By: Khabar Samriddhion: In: Slider, कुराकानी, प्रदेशNo Comments
सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश नम्बर ३
संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सरकारले अझै पनि स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको छैन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने बारेमा प्रदेशसभा प्रवेश पाएको छ । तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारकै पखाईमा रहेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले लामो छलफल र गृहकार्य गरेपनि न सहमति जुटाउन सकेको छ न मतदानबाटै स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी हैटौडाबाट प्रशासनिक काम गर्दै आएको छ । तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको समस्या भने झन जटिलता थपिदै गएके छ । प्रदेश सरकारसँग बजेट भएर पनि कर्मचारीको अभावको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । समयमा नै केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण नगर्दाको पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो गति अनुसार काम अगाडि बढाउन सकेको छैन् । यसै विषयमा प्रदेश नम्बर ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग प्रदेशको स्थायी राजधानी, कर्मचारीको समस्या, कानुन निर्माण लगायतको विषयमा केन्द्रीत भएर गरेिएको कुराकानीः–
प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष वितिसक्दा समेत ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन किन होला ?
–प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार कानुनी हिसाबले प्रदेश सभामा छ । यो कानुनी विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय महत्वको राजनीतिक विषय पनि हो । यसमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सांसद सबैको साझा धारणा विकास गरेर निर्णयमा पुग्न सकियो भने जनताको भावनालाई पनि समेटेर जान सकिन्छ ।
यसरी टुंगो लगाउदा वस्तुवादी र दिगो हुन्छ । अहिले सेवा केन्द्रको रुपमा अस्थायी राजधानीको रुपमा हेटौडाबाट कामकाज भइरहेको छ । प्रदेश सभामा राजधानीको विषय प्रवेश भइसकेको छ । अहिले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको कारणले त्यो विषय छलफलमा जान सकेको छैन् ।
अब बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा यो विषय छलफलमा जान्छ । अहिलेसम्म हामीले साझा धारणा बनाउन कोशिस गरिरहेका छौं । तर अझै साझा धारणामा पुग्न सकिरहेका छैनौं । यदी साझा धारणा बन्न सकेन भने प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको दुई तिहाई मतदानबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिनेछ ।
जहाँसम्म राजधानी हैटौडा अनुकूल छ छैन भन्ने सबालमा भौगोलिक हिसाबमा केन्द्र हेटौडा होइन । तीन नम्बर प्रदेशको १३ वटा जिल्लाहरुको तुलनात्मक रुपमा अरु नै ठाउँ हुन्छ । तर संघीयतामा गएपछि संघीयताको मुख्य मर्म भनेको सन्तुलित विकास हो ।सेवा प्रवाहमा जनताहरुको सहज पहुँच हुनु हो । सबैलाई भौगोलिक र प्रशासनिक सुविधा पनि हामीले दिनुपर्छ । सबै विषयलाई हेरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं ।
भनेपछि ढिलाइ हुनुको कारण पार्टीको निर्णयको पर्खाइ हो ?
–पूर्ववर्ती सरकारले अस्थायी राजधानीको केन्द्र तोक्ने सबालमा जति सुविधा थियो । अहिले स्थायी तोक्ने विषयमा त्यस्तो सुविधा छैन् । किनभने एक ठाउँमा अस्थायी भनेर गइ नै सकेको छ प्रदेशका ५५ लाख जनताहरुको मनोभावना सम्बोधन नभएकोजस्तो हामीलाई लागिरहेको छ । यो चुनौती र जटिल विषय भएको हुनाले यसले समय लिएको हो । हामीले सोचेकोजस्तो यो सजिलो काम छैन् । मुख्यमन्त्रीको सक्रियता नभएर भन्ने पनि होइन ।
१ सय दस जना प्रदेशसभाका सांसदहरुको आ–आफनै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने इन्ट्रेष्ट छ । भित्री मधेसमा जादाँ त्यहाँका जनताले आफ्नो ठाउँमा होस भन्ने चाहना राख्छन । काठमाडौं उपत्यका र उत्तरपूर्वी पहाडका जिल्लाका जनताहरुले काठमाडौं उपत्यका वरिपरी काभ्रे, भक्तपुर लगायतको ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् । सर्वसहमतिम जाने लागेकाले पनि ढिलाा भएको हो ।
–संघीयताको मुख्य मर्म भनेको सन्तुलित विकास हो ।
– हेटौडालाई केन्द्र बनाएर बस्ने कि नबस्ने ?
– आकांक्षा अनुसारको सबै काम हुन सकेका छैनन्
– युवाहरुलाई देशभित्र नै बस्न आह्वान गर्नुपर्छ
– विद्यालय शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्नतर्फ गइरहेका छौं
– युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं
–भौगोलिक हिसाबमा केन्द्र हेटौडा होइन
स्थायी राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर राजधानीको टुंगो लगाउन सकिन्छ कि सकिदैन ?
–प्रदेश सभामा विभिन्न धारणाहरु समेटिएको प्रतिवेदन छ । त्यहीँ आधारलाई लिएर छलफल गरिरहेको छौं । प्रतिवेदनमा विभिन्न सम्भावना देखाएको छ । त्यस मध्य साझा धारणा बनाएर अगाडि बढने कोशिस छ ।
अब कति समय लाग्छ प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन ?
–अबको प्रदेश सभा बैठले टुंगो लगाएर जानु पर्छ भनेर मेहनत गरिरहेको छ । हामीले सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राजनीति दलको धारणा, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष दलको धारणा सबैको धारणाको आधारमा सहमतिको लागि कोशिस गरिरहेका छौं । सहमतिमै राजधानीको टुंगो लगाउने कोशिस हुन्छ । यदी भएन भने भोटिङ गराउन पनि सहमति गछौं । मतदानमा जादा पनि सहमति कायम गरेर जानु प¥यो । कुन मोडल र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति गरेर जानु पर्ने अवस्था छ ।
स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दोका समस्या के–के हुन ?
–स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा केही असहज छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद, जनप्रतिनिधिहरुको मनोविज्ञान पनि स्थायी बन्न सकेको छैन् । हेटौडालाई केन्द्र बनाएर बस्ने कि नबस्ने ? कोठा लिने कि नलिने ?यस्तो कुराले पनि कामलाई प्रभावित गरेको छ । आफ्नो स्थायी बास नहुँदा माननिय सदस्यहरु पनि एक रात हेटौडामा टिक्न सक्नुहुन्न । काम सकेपछि काठमाडौ लाग्नुहुन्छ । कर्मचारीहरुको लागि त्यतिकै चुनौती छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना कहाँ के निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई प्रभावित पारेको छ । समग्रमा विकास निर्माणलाई केही ढिलाई गर्ने, सेवा प्रवाहलाई केही ढिला गर्ने चाहीँ भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?
–प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको क्रियाकलाप्रति सन्तुष्ट छु । हामीले गर्नुपर्ने आकांक्षा अनुसारको सबै काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार पहिलो सरकार हो । हामीले सुरुमा आधारभूत अस्थायी संरचनाको विकास गर्यौँ । कानुनको अभाव थियो । कानुन निर्माण गर्यौ । जनशक्ति थिएन । नेपाल सरकारबाट काजमा गएका अथिति कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले संमायोजन मार्फत प्रदेश सरकारमा कर्मचारी प्रक्रियाले गति लिएको छ । संरचना विकासको अभाव, कानुनको अभाव र कर्मचारीको अभावको बीचमा हामीले अहिले जे नजिता हासिल गरेका छौं, त्यो भन्दा बढी सम्भव थिएन ।
कर्मचारी प्रदेशमा किन आर्कषित हुन नसकेको होलान ?
–प्रदेश सरकारले जति कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थियौ । जति लक्ष्य राखेका थियो । ती लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव एउटा कारण हो । प्रदेश सरकार मातहतमा फिल्डमा कार्यालयहरु थिएन ।
मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनायो । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालय मातहत हुनु पर्दथ्यो त्यो थिएन । त्यसकारणले विकास निर्माण र जनसेवाको कामले जुन गतिमा जानु पर्दथ्यो त्यो जान सकेन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा फिल्डमा कार्यालय बनाएका छौं । त्यो पनि पूर्ण भएको छैन् । यो चौमासिकबाट विकास निर्माण र जनसेवाको कामले गति लिएको छ ।
सरकारले समृद्धिको नारा अगाडि सारेको छ । समृद्ध प्रदेश बनाउन प्रदेश ३ को सरकारले के–के आधार तय ग¥यो त ?
–समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हो । त्यसको लागि तीनै तहका सरकारले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस अवधिमा प्रदेश नम्बर ३ को समग्र वस्तुस्थिति तयार गरेका छौं । यसबाट प्रदेशको अवस्थाको चित्रण गरेको छ । समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न दिर्घकालिन, मध्यकालिन र अल्पकालिन योजना तय गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मानव विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा प्राथकिताहरु के–के हुन भनेर प्रदेश सरकारले अन्तिम रुप दिने काम गरेको छ । आगामी बर्षबाट आवधिक योजन कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अगाडि जाने गरी काम गरिरहेका छौं ।
बजेट विकेन्द्रीत नगर्ने, केन्द्रीकृत गरेर नमूना परियोजना सुरु गर्ने, विकासको लागि आय आर्जनको गर्ने योजना,रोजगारी सृजना गर्नको लागि गेम चेन्चर प्रोग्रामहरु बनाएर अगाडि बढेका छौं । आगामी दिनमा पनि धेरै साना आयोजनामा प्रदेश सरकार निश्चित सिलिङ तोकेर मात्र जाने, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने योजनाहरु प्रदेश सरकार नजाने तय भएको छ । साझा अधिकारको सूचिमा भएका कुराहरुलाई प्रदेश सरकारले शर्सत र समानुपातिक अनुदान दिएर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचिमा रहेको क्षेत्राअधिकारभित्र रहेका अधिकारहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर ठूला योजनाको रुपमा विकास गरेर जाने सोचमा प्रदेश सरकार छ ।
लाखौ युवाहरु देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिएका छन् । देशभित्र नै रोजगारी सृजना गर्ने बारेमा प्रदेश सरकारको के योजना छ ?
–रोजगार सृजना गर्ने सबालमा हामी नेपालीहरुले सही ढंगले छलफल बहस गर्न सकेकै छैनौं । चुरो विषयमा हामी आउनै सकेका छैनौं । सबै भन्दा पहिला रोजगारी सृजना गर्न प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । यसको लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमा हुन आवश्यक छ । अहिले हाम्रो सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्व विद्यालयबाट उत्पादन भएको दक्ष जनशक्ति, सृजनात्मक क्षमता भएका युवाहरु जीवनमा उर्जा भएका युवाहरु देशमा वातावरण छैन भनेर विभिन्न बहानामा विदेशिने गरेका छन् ।
देशलाई विभिन्न दोषारोपण गरेर विदेशिने प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर देशभित्र नै रोजगारी सृजना गर्ने, नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति भनेको युवाहरु हो भन्ने कुरा हामीले आम युवाहरुलाई बुझाउन नसक्दासम्म हामी गेम चेन्ज गर्न सक्दैनौं । त्यसको लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहन गनुपर्छ, युवाहरुलाई देशभित्र नै बस्न आह्वान गर्नुपर्छ । प्रोत्साहन गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । त्यहीँ भएर प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । दसौ करोड बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौं । दक्ष जनशक्ति राज्यभित्र नै रोक्नु प¥यो । त्यो दक्ष जनशक्तिले देश विकासको आइडिया निकाल्नु पर्यो । त्यसपछि मात्र देशको आर्थिक समृद्धि र उत्पादनमा बृद्धि हुन सक्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
–सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वाथ्य, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक लगायत सामाजिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । यो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश सरकारले केही नयाँ कामको सुरुवात यसै बर्षबाट गरेका छ । खासगरी विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्नको लागि शैक्षिक सुदृढिकरण कार्यक्रम भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौं । दोस्रो ग्रामिण क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको सामुदायिक क्याम्पसहरु हो ।
त्यसैले सामुदायिक क्याम्पसको सबलिकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि क्याम्पसको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेशभित्र करिब १ सय ६२ वटाका सामुदायिक क्याम्पसलाई सबलीकरण अनुदानको व्यवस्था हामीले गरेका छौं । बाल विकास सहजकर्तालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएका छौं । मावि तहका शिक्षकहरुलाई तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको रुपमा विकास गर्नको लागि पाँच हजार शिक्षकहरुलाई तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिभित्र रहेर प्रदेशको शिक्षा नीतिको विकास गर्ने, प्रदेशले निर्माण गर्ने पाठयक्रमको बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौं र विद्यालय शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्नतर्फ हामी गइरहेका छौं ।
अहिलेको संविधानले आधारभुत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न खालका जटिल रोगको उपचार गर्न राज्यले अनुदान दिनुपर्नेछ । सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँच पु¥याउने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश नम्बर ३ को सरकार सबै नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । विद्यालयबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौं । जनताको जिउ धनको रक्षा गर्नकोे लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालबाट सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि हाम्रा अस्पताललाई आधुनिकरण गर्ने, स्तरउन्नती गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, औजार उपकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । युवा तथा खेलकुदतर्फ पनि नयाँ कामको थालनी गरेका छौं । प्रदेश खेलकुद परिषद् विधेयक हामीले पारित नै गरिसक्यौं । खेलकुद परिषद् हामी गर्दैछौ ।
खेलाडीहरुको व्यवसायिक जीवनको सुरक्षा गर्ने र खेल पनि एउटा मनोरञ्जन, शारीरिक कसरत र व्यवसायिक कुरा हो भन्ने बुझाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौ । युवाहरुलाई उद्यामशिल र स्वरोजार बनाउने कार्यक्रम ल्याएका छौं । प्रदेशलाई बालमैत्री बनाउने, प्रदेशभित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । सडकमा सहयोगको अपेक्षा सहित घरवार विहिन भएर बसेका सडक मानवहरुलाई छानामुनि ल्याउने, खाना र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वय भइरहेको छ । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं ।
शिक्षा क्षेत्रको कुरा त गर्नु भो तर सामुदायिक विद्यालयहरु त बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ नि ?
–ग्रामिण क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कम हुनुमा पहिलो शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु र दोस्रो रोजगार लगायत क्रियाकलापको लागि अभिभावकहरु गाउँबाट शहरतिर प्रवेश गर्नु हो । यसलाई समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले नमूना विद्यालयको विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । मर्ज गरेर जाने, शिक्षकहरु पर्याप्त बनाउने, दक्ष शिक्षकहरको व्यवस्था गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुको अर्को विकल्प छैन् । विस्तारै समाजवादी राज्यमा उच्च तहसम्मको शिक्षा पनि निशुल्क हुँदै जानु पर्ने हुन्छ ।
प्रदेश ३ भित्र कति वटा अस्पताल निर्माण हुँदैछ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तीन तहको सरकारमा विभाजित गरिएको छ । विशिष्टकृति स्वास्थ्य सेवा केन्द्रीय सरकार अन्तर्ग पर्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार र आधाभुत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्छ । १५ सैयाको अस्पताल स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यो भन्दा माथिका विगतको जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारले हेर्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने अस्पतालको लागि अनुदान दिएका छौं ।
एक गाउँपालिका एक १५ सैयाको अस्पताल कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यहीँ अवधारणा अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र उपकरणको लागि पनि बजेट दिएका छौं । यो बर्ष करिब १६ वटा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट १५ सैयाको अस्पतालको सेवा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं । १८ वटा संस्थालाई स्तरउन्नती गरेर १५ सैयाको अस्पताल बनाउने पूँजीगत व्यवस्था गरेका छौं ।
केन्द्र सरकारले समय नै कानुन निर्माण नगर्दा त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई कतिको परेको छ ?
–केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयमा समस्या परेको छ । केन्द्रले लोक सेवाको आधार र मापदण्ड तय नगरिदिदा प्रदेश सरकारले आजसम्म कानुन बनाउन पाएको छैन् । प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउने र जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सकेको छैन् । केन्द्रले प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण नगरिदिदाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन बनाउन पाएको छैन् । त्यसले पनि प्रभाव पारेका छ । साझा अनुसूचिका कानुन समयमा निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर अगाडि जान सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने अधिकार कटौती गदै लगेको गुनासो हुँदै आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
–नेपाल संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबालमा केही सकारात्मक÷नकारात्मक धारणा आउनु स्वभाविकै हो । हामी लामो समय एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसक्ता सञ्चालन गरेर आएको मानसिकता र हामीसँग भएको जनशक्ति पनि त्यहीँ प्रक्रियाबाट अव्यस्त भएर आएकाले केन्द्र केन्द्रीत मानसिकताबाट अहिले पनि काम भएकै छ ।
तर यसको अर्थ यो होइन कि संघीयतालाई कार्यान्वयन नगरी जान्छौ । संघीयता कार्यान्वयन गरेर जानु पर्ने हुन्छ । ढिलो चाँडो विभिन्न बहानाबाट केन्द्र सरकार मुक्त भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरु पूर्ण रुपमा दिनुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म हामीले संघीयता जे उदेश्यको लागि ल्याएको हौं, त्यो प्राप्त हुँदैन ।नेपाल समाचारपत्रबाट मधुसूदन रायमाझीको कुराकानी ।
प्रकाशित मिति : २०७५|१२|१०